Xeebta Woolacombe, oo ah xeeb UK | Wararka Safarka
Xeebaha iyo Dalxiisyada | | Reino UNIDO
Badanaa ma tagno meelaha sida Boqortooyada Midowday ama Iskotland si aan u aragno xeebo, maxaa yeelay cimilada badanaa ma fiicna. Laakiin tani macnaheedu maahan inaysan ahayn meelo aad ka heli karto goobo qurux badan oo runtii aad u qurux badan oo aad ka faa'iideysan karto. Xeebta Woolacombe Waxay ka mid tahay xeebahaas cajiibka ah.
Xeebtan waxaa loo arkaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican Reino UNIDO, marka waa meel loo baxo hadaan fasax ku jirno. Si kastaba ha noqotee, sidaan soo sheegnay, cimiladu marar dhif ah ayey raacdaa, kaliya xilliga xagaaga. Si kastaba ha noqotee, maahan oo keliya meel qorraxdu ka dhacdo, maadaama quruxdeeda dabiiciga ahi ay tahay soo jiidasho lafteeda.
Xeebtaani waa a dhul bacaad ah oo aad u ballaaran, oo dhererkeedu yahay shan kiiloomitir aadna u ballaadhan, sidaa darteed waa suurtagal in la arko dad sannadka oo dhan, midkoodna socod, ordaya ama ku nasanaya goobta dabiiciga ah. Waxay ku wareegsan tahay buuro dhaadheer waxaana jira meelo qaar oo guryo leh, laakiin guud ahaan waxaa jira jawi dabiici ah oo keli ah, oo ku habboon dadka jecel xasilloonida.
Xeebtani waxay ku taal aagga North Devon, waxaana la gudoonsiiyey calanka buluuga ah. Waa meel ku habboon qoysaska iyo badmaaxiinta, waxayna noqotay meel lagu raaxeysto isboortiga iyo maalmaha yar ee qoraxdu jirto inta lagu jiro xagaaga. Xilliga sare waxay sidoo kale leeyihiin badbaadiye iyo adeegga amniga.
Waa a xeebta qoyska maxaa yeelay waa xasilloon tahay, si fiican ayaa la isugu gudbiyaa waxaana jira meelo leh biyo ammaan ah oo aan gun-dheer lahayn. Laakiin sidoo kale waxaa si fiican u yaqaan aqoonyahannada, maaddaama uu jiro tartan caalami ah oo ku dhex jira. Xitaa waxaa jira iskuulo lagu barto ku raaxeysiga ciyaartan. Si aad halkaas u hesho waxaa jira basas iyo meel weyn oo baarkinka aagga, oo si fudud wax walba looga heli karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Wadamada » Reino UNIDO » Xeebta Woolacombe, oo ah xeeb Boqortooyada Midowday
Xeebta Hyams, oo ah xeeb ciid cad ah